Naqshadeynta Calaamadaha Wax-ku-oolka Shabakada wax ku-oolka ah
Dadku waxay ogyihiin muhiimadda ay leedahay shabakadda websaydhka ,
sidaas darteed waxaa jira baahi weyn oo loo qabo. Codsiga lacagta caddaanka ah ee dalbashada, barnaamijyo badan oo shabakada webka ah ayaa la horumariyey. Qaar ka mid ah waxay leeyihiin hal dhibcood oo niyad jab ah ama kan kale.
Dhab ahaantii, shirkadaha qaarkood waxay ku khasbanaadeen in ay tijaabiyaan dhowr arjiyada ka hor inta aysan ku turjunin midka ku haboon ganacsigooda. Halkan waa talo soo jeedin. Isku day shabakada bogga 9. 62, waa sahlan tahay in la isticmaalo bogga shabakadda software.
Iyada oo Website Saaraajiye 9. 62, way fududahay in la soo dejiyo bogga oo dhan oo keydso dhammaan waxyaabaha ku jira daroogada adag ee degaanka. Goobaha la soo duubay waxaa loo isticmaali karaa oo dib loo isticmaali karaa tan iyo markii ay horayba u badbaadiyeen. Muuqaalada kale ee soo jiidashada ee barnaamijka ayaa lagala hadlay hoosta. Awoodda inay ku xoqdo ilaa 100 boqol oo bog ah hal mar
Hal shay oo qalabkan u taagan waa waxtarkeeda. Waxay soo dejisan kartaa illaa 100 bog oo shabakad, muuqaal, sawiro, iyo noocyo kale oo xog ah oo ku jira hal kumbuyuutar. Waxa kale oo uu leeyahay awood u leh inuu soo dejiyo faylasha ka yimid bogag badan oo isku mar ah. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ku qorto dhammaan URL-yadaada bartilmaameedka.
Marmarka qaarkood waxaad u baahan kartaa keliya mawduucyo gaar ah bogagga shabakadaha la beegsanayo. Qalabkani wuxuu kaa caawimi doonaa maaddaama uu kaftamayo kaliya waxyaabaha looga baahan yahay bogagga shabakadda. Si kale haddii loo dhigo, Web Extractor 9. 62 sidoo kale waxay bixisaa heer sare oo sax ah.
Mudada tijaabada 30-maalmood
Dabcan, waxaa laguu oggol yahay inaad tijaabiso maalmo dhowr ah si aad u go'aamiso inaad iibsato ama aadan. Tani waa sababta ay ula socoto mudo 30 maalmood ah oo tijaabo ah. Waxay joojin doontaa ka jawaabidda maalinta 30aad haddii aadan iibsan.
Waxay la shaqaysaa dhowr qaab oo nidaamsan nidaamka Windows. Waxay taageertaa Windows Vista, 2003, 95, XP, Me, 2000, NT, iyo Windows 98.
Cabbirkiisu yar yahay Cabbirkiisu waa 662. 62KB. Xitaa xitaa ilaa 1 MB. Sidaas awgeed, waxay qaadan doontaa oo keliya qadar qadar ah oo ah meel kaydin ah oo ku taal dariiqaaga adag. Tani waa mid aad u muhiim ah maxaa yeelay dadku hadda waxay isticmaalaan goobahooda kaydinta si qarsoodi ah. Waxay doorbidaan codsiyada yaryar. Tani waa sabab kale oo sare loogu qaadayo barnaamijkan. Taageerada farsamada casriga ah Intii aad isticmaaleysid, waxaa laga yaabaa inaad ku guuleysatid caqabadaha qaarkood. Tani waa sababta barnaamijku uu ula socdo 24/7 taageero farsamo. Waxaad marwalba weydiisan kartaa caawimaad kooxdayada taageerada farsamada waqti kasta iyo maalin kasta.
Waa kuwan soo socota:
Wuxuu xoqin karaa 100 xog oo xog ah isla markiiba
hal keli ah
Waa sahlan tahay in la isticmaalo
Waa yar tahay cabbirka (662). 62KB)
Taageerada farsamo ee shabakadda
Maxay tahay sababta aan u shaqeyneynin Windows 98, NT, 2000, Me, XP, 95, 2003, iyo Windows Vista
ka faa'iideystaan ​​muddada tijaabada si ay u helaan dareenkooda? Waa mid bilaash ah, oo lagama maarmaanka u ah si aad u iibsato ka dib muddada tijaabada. Si kale haddii loo dhigo, ma jirto wax lumin inaad isku daydo Source .